Vaovao - Fanadihadiana tsena momba ny tsenan-jaza eran-tany sy fifehezana an-tsokosoko 2020, karazana, fampiharana, vinavina ary fanadihadiana COVID-19 2025
Ny tsenan'ny mpandeha an-jaza sy mpandehandeha eran-tany amin'ny taona 2020, noravan'ny mpanamboatra, ny faritra, ny karazany ary ny fampiharana, dia maminavina ny vokatra mivaingana tsara indrindra, ny fomba fampidirana ary ny teknolojia farany tamin'ny 2025. Ny tatitra dia mamantatra sy manazava ny refy tsena tsirairay hanombanana ireo derivatives lojika, izay mety nametraka ny fitarihan'ny fitomboan'ny tsena fitaterana an-jaza sy mpandeha an-tany. Ny tatitra dia nanao fanadihadiana betsaka momba ny firafitry ny tsena ary nanombatombana ireo fizarana tsena sy zana-tsokajin'ny indostria. Noho ny fanampian'ity tatitra ity, ny mpamaky dia afaka mandray fanapahan-kevitra farany momba ny fehin-kevitra mety hitranga amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, izay mitarika ny fitomboan'ny tsena manerantany. Amin'ity antontan-taratasim-pikarohana ity dia ho mora kokoa ny mametraka sy manatsara ny dingana tsirairay amin'ny fizotran'ny indostria ao anatin'izany ny fandraisana anjara, ny fahazoana, ny fangejana ary ny fanonerana vola.
Ny tatitra dia mizara ny tsenan'ny stroller sy stroller manerantany ho an'ny tsena marobe mifototra amin'ny toetra, asa, fampiharana ary karazany. Ity fampahalalana ity dia hanampy ireo miditra vaovao sy ireo mpilalao vao misondrotra hahatakatra ny firafitry ny tsena amin'ny ankapobeny ary hahazo vaovao momba ireo vokatra sy serivisy isan-karazany misy eny an-tsena. Ny tatitra dia mirakitra fampahalalana amin'ny antsipiriany ihany koa momba ny fizarana lehibe amin'ny tsena izay mety hitarika na hitondra ny tsena iray manontolo mandritra ny vanim-potoana mialoha ny taona 2020 ka hatramin'ny 2025. Ilay tatitra ihany koa dia manarona ny fahavakisan'ny faritra ny tsena. Tsy misy isalasalana fa miankina betsaka amin'ny sehatra samihafa amin'ny tsena rakotry ny tatitra fikarohana momba ny tsena ny orinasa, noho izany ity antontan-taratasy ity dia manome azy ireo fahitana tsara kokoa hitarika ny orinasa amin'ny làlana tsara. Ny toetra mahazatra dia raisina ihany koa ho an'ny fizarazarana, toy ny fizarana tsena manerantany, ny tombontsoa iraisana, ny fangatahana manerantany, ary ny famatsiana ny strollers sy ny strollers.
Fanamarihana: ny tatitra ataonay dia mifantoka amin'ny olana lehibe sy ny loza mety hitranga amin'ny orinasa noho ny valanaretina COVID-19 tsy mbola nisy toa azy.
Mpilalao lehibe miasa amin'ny tsenan'ny stroller sy stroller manerantany: Goodbaby, Mybaby, Artsana, Combi, BBH, Seebaby, Emmaljunga, Shenma Group, Newell Rubbermaid, Aing, Dorel, UPPAbaby, ABC Design, Hauck, Stokke, Peg Perego, Roadmate
Tsinjara misaraka isan-karazany, ny vokatra dia azo zaraina amin'ny: stroller tokana, strollers maromaro, strollers
Ny tsena zarain'ny fampiharana dia mizara ho: latsaky ny 1 taona, 1 ka hatramin'ny 2,5 taona, ary mihoatra ny 2,5 taona
Araka ny fizarazaran'ny faritra, ny tsena dia mizara ireto faritra lehibe manaraka ireto: Amerika Avaratra (Etazonia, Kanada, ary Mexico), Eropa (Alemana, France, United Kingdom, Russia, ary Italia), Asia Pacific (China, Japan, South Korea, India ary Azia atsimo atsinanana), Amerika atsimo (Brezila, Arzantina, sns.), Afovoany Atsinanana sy Afrika (Arabia Saodita, Egypt, Nizeria ary Afrika Atsimo)